Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia manolotra tondrozotra ho an'ny hopitaly
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia manolotra tondrozotra ho an'ny serivisy hopitaly sy ER
Azonao atao ve ny miaina ao amin'ny ER na hopitaly any New York? Dr. Elinor Garely dia narary tany Mexico, faritra sasany atsy Afrika, Italia ary Karaiba - ary tafavoaka velona!
Ny fahavelomana vonjy taitra any New York dia tsy mitovy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Rehefa tafavoaka velona tamin'ny aretina tamin'ireto toerana rehetra naleha ireto dia maninona no matahotra ny ho marary any New York?
Ny traikefa vao haingana teo amin'ny tontolon'ny vonjy maika tao amin'ny efitranon'i NYC dia niteraka fahitana nahatalanjona.
Dr. Garely dia nandray ny zavatra niainany ratsy ary namadika azy ho tsara miaraka amin'ny tolo-kevitra ho an'ny hopitaly momba ny fomba ahafahan'izy ireo mianatra avy amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny.
Ny traikefa Serivisy hopitaly ER any New York tsy amerikanina ary tsy olona.
Manana departemanta ER vao haingana sy serivisy mpitsabo marary any Manhattan, tsy azony antoka raha ho velona izy hitantara ny zava-niainany tamin'ny hopitaly roa tany New York. Ny traikefa amin'ny serivisy hopitaly ER any New York dia tsy amerikanina ary tsy mahaolona - vakio ity.
Izy dia nandinika, nanoratra ary nampianatra ireo lafin-javatra marobe sy dinamika ao amin'ny hotely, fitsangatsanganana ary fizahan-tany fizahan-tany nandritra ny taona maro ho mpitati-baovao eTurboNews.com ary Profesora ao amin'ny University University of New York, campus BMCC.
Manovo ny fahalalany sy ny zavatra niainany, manolotra ny soso-keviny izy amin'ny fomba hanatsaran'ny hopitaly ny serivisy sy ny valin'ny marary amin'ny alàlan'ny fampiasana hotely ho modely.
Ny mpitantana ny hopitaly, ny mpanao mari-trano, ny mpamorona anatiny, ary ny mpitantana ny IT dia tokony hifantoka amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny raha toa ka liana amin'ny fanatsarana ny fisian'ny serivisy ho an'ny marary izy ireo ary hampitombo ny moraly ny mpiasa sy ny mpanohana.